Khubaro Daaha Ka fayday Garoonka Diyaaradaha ee Aduunka Ugu mashquulka badan iyo Marinada Diyaaradaha | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Khubaro Daaha Ka fayday Garoonka Diyaaradaha ee Aduunka Ugu mashquulka badan iyo...
Khubaro Daaha Ka fayday Garoonka Diyaaradaha ee Aduunka Ugu mashquulka badan iyo Marinada Diyaaradaha
Diyaaradaha ayaa labadaas garoon ku kala safray 30,537 duulimaad intii u dhaxaysay sannadkii hore ilaa bishii Feebaraayo ee 2018kii, sida ay sheegtay OAG Aviation oo ah waax diiwaangalisa duulimaadyada iyo jadwallada diyaaradaha.
Marinkan ayaa ka sare maray midka isku xira magaalooyinka Hong Kong iyo Taipei, kuwaas oo ay inta badan adeegsadaan diyaaradaha Aasiya u kala socda.
Safarka diyaaradda ee Singapore iyo Kuala Lumpur ayaa qaata qiyaastii hal saac, waxaana jira qorsheyaal lagu dhisayo khad tareen oo xawaarihiisu sarreeyo oo isku xira labada magaalo.
Tirada duulimaadyada een kor ku soo xusnay ayaa ka dhigan in maalin walba ay khadkaas adeegsadaan 84 duulimaad.
Khadkaas waxaa mara diyaaradaha aan qaaliga ahayn ee Scoot, Jetstar, Air Asia iyo Malindo iyo waliba sidoo kale shirkadaha waawayn ee Singapore Airlines iyo Malaysia Airlines.
OAG ayaa warbixinteeda ku sheegtay in marinka caalamiga ah ee ugu mashquul badan adduunka marka Aasiya laga reebo uu yahay midka isku xira garoonka LaGuardia ee magaalada New York iyo garoonka diyaaradaha ee Pearson ee magaalada Toronto, kaas oo ay mudo gudaheed ku mareen 16,956 oo duulimaad.
Marka ay timaado dhanka rakaabka diyaaradaha waxaa wali ugu mashquul badan midka Hong Kong iyo caasimadda Taiwan waxaana adeegsada 6.5 milyan oo ruux.Marinka isku xira Singapore iyo caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur ayaa noqday midka caalamiga ah ee ugu mashquulka badan adduunka oo dhan, sida ay muujinayso cilmibaaris la sameeyay.
Midka labaad ee ugu mashquulka badan waa Singapore -Jakarta oo ay adeegsadaan 4.7 milyan oo rakaab ah, waxaana ku soo xiga khadka Singapore-Kuala Lumpur oo ay 4 milyan adeegsadaan.
Sikastaba ha ahaatee khadadka duulimaadyada ee ugu caansan adduunka ayaan la tartami karin khadadka duulimaadyada gudaha ah ee ugu caansan.
Khadkii duulimaad ee ugu mashquulka badnaa adduunka oo dhan sannadkii 2017kii wuxuu ahaa midka caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul iyo jasiiradda loo tamashle tago ee Jeju. Waxaana lagu qiyaasay in ay 65,000 oo jeer ay diyaarado u kala duuleen sannadkii 2017kii, sida ay sheegtay OAG – taas oo u dhiganta 180 duulimaad maalin walba.
Previous articleHay,ada Illaalinta Tayada waxyaabaha Debada Kasoo Dega oo ganaaxday Shirkadii dalka Keentay Shidaalka Xun,
Next articleBerbera,Deg,Deg, Daawo, Xukuumada Kulmiye waxay Soo Kordhisay wax Somaliland Ku Cusub Gudoomiyha xisbiga wadani,